ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် တစ်ရက်ထဲ ကိုဗစ် လူနာသစ် ၂၀,၀၀၀ နီးပါး နှင့် သေဆုံးသူ ၁၂၂ ဦးရှိခဲ့ - Xinhua News Agency
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် တစ်ရက်ထဲ ကိုဗစ် လူနာသစ် ၂၀,၀၀၀ နီးပါး နှင့် သေဆုံးသူ ၁၂၂ ဦးရှိခဲ့
ပါရီ ၊ မတ် ၁ ရက်(ဆင်ဟွာ)
ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ ပြီးခဲ့သော ၂၄ ရက်အတွင်း ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လူနာသစ် ၁၉,၉၅၂ ဦး စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီး သေဆုံးသူ ၁၂၂ ဦးရှိခဲ့ကြောင်း ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီက ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန်မှ ယခုအထိ ရောဂါကူးစက်ခံရသူပေါင်း ၃,၇၅၅,၉၆၈ ဦး နှင့် သေဆုံး ၈၆,၄၅၄ ဦး အသီးသီးရှိကြောင်း သိရသည်။ လွန်ခဲ့သော ၇ ရက်အတွင်း ဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူနေရသည့် လူနာအရေအတွက်မှာ ၉,၆၁၃ ဦး ရှိခဲ့ပြီး ယင်းတို့အနက် ၁,၈၇၁ ဦးမှာ အသက်ရှူစက်ကိရိယာများ တပ်ဆင်ထားရကြောင်း အေဂျင်စီက ဆိုသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပါရီမြို့ ရှိ Sacre Coeur Basilica ရှေ့၌ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက်တွင် ထိုင်နေကြသူများအား နေရာပြောင်းပေးရန် ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားနေစဉ်(ဆင်ဟွာ)
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ ရက်က Le Journal de Dimanche(JDD) ဂျာနယ်နှင့်ပြုလုပ်သောတွေ့ဆုံးမေးမြန်းမှုတွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံ ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Jerome Salomon က ဗြိတိန်နိုင်ငံ၌ ပထမဆုံးတွေ့ရှိခဲ့သည့် မျိုးဗီဇကွဲဗိုင်းရပ်စ်သည် ယခုအခါ ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ အများအပြားကူးစက်နေပြီးဖြစ်ကြောင်း ၊ ကူးစက်မှု၏ ၅၃ ရာခိုင်နှုန်းသည် အဆိုပါ မျိုးဗီဇသစ် ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးဖြစ်နေကြောင်း ဆိုသည်။
အဆိုပါ မျိုးဗီဇသစ်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကို ပြင်သစ်နိုင်ငံ၌ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ ၂၆ ရက်တွင် ပထမဆုံး စတင်တွေ့ရှိခဲ့ပြီးနောက်နိုင်ငံအတွင်း ခရီးသွားလာခွင့်ကို တင်းကျပ်စွာတားမြစ်ခဲ့သည်။
“ အခြေအနေတွေက သိပ်ကိုထိတ်လန့်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာ ထင်ရှားနေပါတယ် ဒါပေမယ့် အစိုးရအနေနဲ့ ညမထွက်ရ အမိန့်အပါအဝင် တင်းကျပ်တဲ့ ရောဂါကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေလုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ အဲဒါက ကောင်းကောင်းအလုပ်ဖြစ်မှာပါ” ဟု Salomon က ပြောကြားခဲ့ပြီး “ ရောဂါရှိတဲ့ တစ်ယောက်ယောက် သွားလာလှုပ်ရှားခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က သူ့ကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဆိုသည်။
ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၇ ရက်အထိ အနည်းဆုံး COVID-19 ကာကွယ်ဆေး တစ်ကြိမ် ထိုးနှံမှုခံယူပြီးသူ ၂၇၂,၉၆၇,၉၃၇ ဦး ရှိပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ပြင်သစ်အစိုးရအနေဖြင့် မေလကုန်တွင် အသက် ၆၅ နှစ်အထက် နိုင်ငံသားအားလုံး နှင့် စက်တင်ဘာမတိုင်မီ လူလတ်ပိုင်းအားလုံး ကာကွယ်ဆေး ထိုးနှံပြီးနိုင်ရန် ရည်မှန်းထားကြောင်း သိရသည်။
တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် ကပ်ရောဂါထိန်းချုပ်ရေး ရုန်းကန်နေရသဖြင့် အချို့နိုင်ငံများတွင် ခွင့်ပြုချက်ရရှိပြီးသော ကာကွယ်ဆေးများကို ဆေးထိုးနှံမှုများ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ ကာကွယ်ဆေးအမျိုးပေါင်း ၂၅၅ ခုကို ထုတ်လုပ်နေပြီး ယင်းတို့အနက် ၇၃ မျိုးမှာ စမ်းသပ်မှုအဆင့်သို့ရောက်ရှိနေပြီးဖြစ်ကြောင်း ဂျာမနီ၊ တရုတ်၊ ရုရှား ၊ ဗြိတိန် နှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံများအပါအဝင် နိုင်ငံများက ကာကွယ်ဆေးထုတ်လုပ်ရေးကို ကြိုးပမ်းလုပ်ဆောင်လျက်ရှိကြောင်း ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့(WHO) ၏ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၃ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ (Xinhua)
PARIS, Feb. 28 (Xinhua) — France registered 19,952 new coronavirus infection cases and 122 related deaths in the past 24 hours, according to figures released by the Public Health Agency on Sunday.
“The situation is obviously very tense but the government has taken strong braking measures, notably the curfew, which is working very well,” Salomon said. “We can still avoid confinement if everyone is mobilized.”
Meanwhile, 255 candidate vaccines are still being developed worldwide — 73 of them in clinical trials — in countries including Germany, China, Russia, Britain and the United States, according to information released by the World Health Organization on Feb. 23.
1-A carnival float depicting the coronavirus is seen in Nice, capital of coastal department of Alpes-Maritimes, southern France, on Feb. 23, 2021. (Photo by Serge Haouzi/Xinhua)
2-Policemen talk to people and ask them to move in front of the Sacre Coeur Basilica atop the Montmartre in Paris, France, Feb. 24, 2021. (Xinhua/Gao Jing)
ဟန်ဂေရီနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်က တရုတ်နိုင်ငံထုတ် Sinopharm ကိုဗစ် ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှုခံယူ
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရှိ ပညာရေးဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ မတ်လတွင် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်မည်ဟု ကြေညာ